Wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlay rabshad Khasaare sababtay oo ka dhacday magaalada Hargeysa | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlay rabshad Khasaare sababtay oo ka dhacday...
Wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlay rabshad Khasaare sababtay oo ka dhacday magaalada Hargeysa
Hargeysa-(Berberanews)- Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur), ayaa ka hadlay isku dhac wax yar ka hor ku dhexmaray Booliska iyo dad shacab ah goobta Inji oo ka tirsan Xaafadda Dumbuluq Degmada Axmed-dhagax ee magaalada Hargeysa.
Wasiirka Arrimaha gudaha oo goobta iska-hor-imaadku ka dhacay gaadhay, ayaa sheegay inay dawladda Somaliland dhaaftay wakhtigii Wiilal yar-yar oo meel xidhay looga yaaci lahaa ama looga baqi lahaa. “Dhammaan dadkii halkaas lagu qab-qabtay waa dembiilayaal, dawladdani way dhaaftay markii innamo yaryar oo koox ah meel xidhay looga yaaci lahaa. Looga baqan maayo in ay innamo yaryari wax u dhimaan.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Md. Duur.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Madaxamed Nuur Carraale (Duur), waxa uu hadalkiisa uu u jeediyey goobta iska horimaadku ka dhacay, waxa uu yidhi; “Markaa waxaan idin farayaa dadkiinnan meesha joogaa inaad halkan si nabad ah uga tagtaan, ciidankuna waajibkoodii ayay qabsanayaan.”
Geesta kale, Taliyaha Ciidammada Booliska Somaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan, ayaa dadka goobta isugu soo ururay ku amray inay si nabada goobihii ay ka kala yimaaddeen iyo guryohooda ugu noqdaan oo ay ka dareeraan meeshaas rabshaddu ka dhacday. Waxaanu Taliyuhu sheegay inay goobtaa hadda wixii ka dambeeya gacan-ku-haynteeda ay la wareegayaan ciidammada ammaanka Somaliland ee Hargeysa.
Si kastaba ha ahaatee, iska hor-imaadka oo ka dhashay dhisme la sheegay in si sharci-darro ah looga bilaabay goob dawladdu leedahay oo uu dhaxaysa Inji iyo Xalane, ayaa xaaladdeedu deggan tahay, waxaana halkaa la dhoobay Ciidammada Booliska oo ammaanka goobta la wareegay.
Previous articleWar Deg-dega: Khasaare Dhaawac oo ka dhashay isku dhac dhex-maray Ciidanka Booliska Hargeysa iyo Dad Shicib ah
Next articleKiiska Qarixii Tiyaatarka Muqdisho oo loo xidhay Askar ka tirsan ilaalada Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya